Ogaden News Agency (ONA) – WAFTIDII JWXO IYO SHIRARKII CALIFORNIA
WAFTIDII JWXO IYO SHIRARKII CALIFORNIA
Hogaanka arimaha dibada ee JWXO Mudane Abdirahmaan Sheikh Mahdi, ayaa maanta soo gaba-gaboobay shirar goos-goos ah oo uu layeeshey qaybaha kala dumawan ee bulshada Somalida-Ogadenia, sida urarada haweenka, ardayda, odayaasha, dhalinyarada iyo dad badan oo matalaya qaybaha kale ee bulsho weynta Somaliyeed.
Sarkaalkaan sare ee kasocdey JWXO ayaa maalmihii lasoo dhaafay wuxuu kaqabtay gobolka California howlo wax ku ool ah ay kamid yihiin wacyi galin iyo cashiro uu kufalaqayeey halganka xaqa ah ee kasocda Ogadenia ee ay hormuudka utahay JWXO. Shacabka kunool California ayaa aad ugu qancey sida uu Mudane Abdirhaman uga jawaabey su,aalahey tabanayeen ama ay ubaahneyeen in looga jawaabo. Hagaanka ayaa dadkoo dhan usheegey in loo keeno qofkasta oo su,aal qaba si uu uga qanciyo uguna sheego go,aanka iyo meesha uu marayo halganka Ogadenia oo hada maraya meeshii ugu fiicneyd.
Mudane Abdirahman ayaa bixiyay shahaadoyin abaal marin ah oo loogu mahad-calinayo qaybaha bulshadu sida adag ay utiiriyeen halganka dhankooda, urarada halkaa lagu abaal mariyay ayaa waxaa kadhex muuqday ururka OYSU qaybtiisa San Diego oo sanadadii lasoo dhaafey gool weyn ciyaaray halganka xaqa ah ee Ogadenia.
waxaa in laxuso mudan madexda kale ee halkaa qayb libaaxa kagaysatey sida Xidhidhiyaha Jaaliyaadka qaybta bariga maraykanka Mudane Ahmed Ali Yusuf iyo Gudoomiyaha Jaaliyada San Diego mudane Abdirahman Mohamud (Holywood) oo baraarujin badan iyo howlgalo kusaabsan abaabulka bulshada kasameeyey goobaha shirka, waxaa kale oo xusid mudan gudidada fulinta jaaliyada San Diego oo howlahaan oo dhan kasoo shaqeysay kuna guulasatay abaabulka iyo kulamada bulshada iyo Hogaanka Arimaha Dibada Mudana Abdirahman.